Buy ကားစင်းလုံးငှါးချင် (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Min Khant Naing Win
.တယောက်ယောက် အတွက် အကျိုးရှိစေမှာ အမှန်ပါ..
#Toyota_Hiace အံစာတုန်း ၁၂ယောက်စီးဖြင့်. #PROMOTION
#မန်းလေး+ပြင်ဦးလွင် ၂ညအိပ်၃ရက်[420000ကျပ်](ဟိုတယ် စီစဉ်ပေးပါသည်)
#ပုဂံ ဘုရားစုံ .ပုပ္ပါး..2ညအိပ်3ရက်... [420000ကျပ်](ဟိုတယ်စီစဉ်ပေးပါသည်)
* အထက်ပါ ဈေးနှုန်းများတွင် hotel ခမပါဝင်ပါ ကျေးဇူးပါ.
* ဆီလမ်းကြေး ယာဉ်မောင်းအပါ အပြီးအစီးဈေးနှုန်းများဖြစ်သည်.
*ရန်ကုန် မြို့တွင်းငှါးရမ်းပါက 1 hour=8000ks (Full air con )
*လေဆိပ် အကြိုအပို့.မင်္ဂလာဆောင် နှင့်ဘွဲ့ယူ ၀န်ဆောင်မှုများလည်းရှိပါသည်။
*Super custom,Wish,Alphard,12&15 Seaters N sar tone etc ကားများလည်း စင်းလုံးငှါးရမ်းနိုင်ပါပြီ.(၅ယောက်စီးမှ၃၃ယောက်စီးအထိ ငှါးရမ်းနိုင်ပါသည်)
အောက်ပါ link ထဲဝင်ပြီး Like and follow လုပ်ထားရုံဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာခရီးသွားနိုင်ပါပြီ..
#ဆက်သွယ်ရ လွယ်စေရန် ဖုန်းနံပါတ်အား Screen shot ရိုက်ထားပေးပါ ကျေးဇူးပါ)